စာအုပ်စင်-၁(စာရေးဆရာအမည်- ခ ၊ဂ ၊န ၊တ၊ အ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » How To.. » စာအုပ်စင်-၁(စာရေးဆရာအမည်- ခ ၊ဂ ၊န ၊တ၊ အ)
စာအုပ်စင်-၁(စာရေးဆရာအမည်- ခ ၊ဂ ၊န ၊တ၊ အ)
Posted by ရွှေအိမ်စည် on Sep 13, 2012 in How To.. | 22 comments
စာအုပ်လင့်များကို သူရိယ၊မြန်မာE-book၊ဇာတိမာန်၊ ဧဒင်ဥယျာဉ်www.edinooyin.comမှကူးလာသည်။
ချစ်ဦးညို ၏ စာအုပ် လင့်များ
1. ရှင်စောပုhttp://www.myanmarebooks.net/wp-content/uploads/2010/08/1.pdf2. ဒေ၀စ္ဆရာနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းhttp://www.myanmarebooks.net/wp-content/uploads/2010/07/%E1%80%B1%E1%80%92%E1%81%80%E1%80%85%E1%81%A6%E1%80%9B%E1%80%AC-%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%82%95%E1%80%86%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8.pdf
4. လောကဓံနှင့် လမ်းလျှောက်အတူထွက်ခြင်းhttp://www.myanmarebooks.net/wp-content/uploads/2010/05/13.pdf
5. နေမင်းလမင်း သိန်းရာထောင်http://www.myanmarebooks.net/wp-content/uploads/2010/04/%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9.pdf
9. ဒုဌဂါမဏိ http://burmesebooks.files.wordpress.com/2009/12/e18092e180afe1808ce18082e180abe18099e1808fe180ad.pdf
10. စာမရီသို. ထူးထူးခြားခြားhttp://burmesebooks.files.wordpress.com/2009/11/chitoonyosar-ma-yi-toe-htu-htu-char-char.pdf
11. လင်္ကာဒီပ ချစ်သူhttp://burmesebooks.files.wordpress.com/2009/11/chit00nyo.pdf
12. စက္ကရုနှင့် ဘဒ္ဒါhttp://burmesebooks.files.wordpress.com/2009/12/sakaru.pdf
13. အီဂျစ်နဲ့ အင်္ဂလန် နိုင်ငံကိုမောင်းသွားထားလေမလားhttp://www.mediafire.com/file/mmnxwznju2m/%E1%80%A1%E1%80%AE%E1%80%82%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%B2%E1%82%95%20%E1%80%A1%E1%80%82%E1%81%A4%E1%80%9C%E1%80%94%E1%80%B9%20%E1%82%8F%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%AD%20%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%99%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%B8.pdf
14. အစီရဝတီ ကုဏလကေသာhttp://images.myengineering.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SulyCQoKCGoAACJTTsE1/%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%81%80%E1%80%90%E1%80%AE%20%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%8F%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%9E%E1%80%AC.pdf?nmid=293657963
15. သမိုင်းမတွင်ပေမဲ့ သမိုင်းဝင်နေမည့်စကားများhttp://images.myengineering.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SulwagoKCGoAABfuA601/%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%99%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%99%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8.pdf?nmid=293657963
16. မလေးမဏိစန္ဒာရဲ့ နှောင်းhttp://images.myengineering.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SuliNgoKCGoAAErDPc01/%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%8F%E1%80%AD%E1%80%85%E1%82%8F%E1%81%B5%E1%80%AC%20%E1%80%9B%E1%80%B2%E1%80%B7%20%E1%80%B1%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8.pdf?nmid=293644071
18. မဏိစန္ဒာ ဥဒါန်းhttp://images.myengineering.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/Sulh7AoKCGoAAD7D@DQ1/%E1%80%99%E1%80%8F%E1%80%AD%E1%80%85%E1%82%8F%E1%81%B5%E1%80%AC%E1%80%A5%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8.pdf?nmid=293644071
20. ချစ်ရပါသော ဒဧကရီhttp://images.myengineering.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SulhmwoKCGoAADPuuQ01/%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%92%E1%80%A7%E1%80%80%E1%80%9B%E1%80%AE.pdf?nmid=293644071
21. ဧကရီ ဖွားစောhttp://images.myengineering.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SulhRwoKCGoAABUHdV81/%E1%80%A7%E1%80%80%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%AC.pdf?nmid=293644071
22.ဥပေက္ခာဒေ၀ီ – ချစ်ဦးညို
ဥပေက္ခာဒေ၀ီ – ချစ်ဦးညို http://www.thanlwin.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=368&Itemid=181
နှင်းကေသရာချစ်တဲ့သူရဲကောင်း (ဆရာ ချစ်ဦးညို )
ချစ်သောပါဒဧကရီ (ဆရာ ချစ်ဦးညို )
ချစ်သူမင်းနန္ဒာ (ဆရာ ချစ်ဦးညို )
ဧကရီ ဖွားစော (ဆရာ ချစ်ဦးညို )
ဒေ၀စ္ဆရာနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း (ဆရာ ချစ်ဦးညို )
မဏိစန္ဒာ ဥဒါန်း (ဆရာ ချစ်ဦးညို )
စိတ်စည်းကမ်း (ချစ်စံဝင်း).pdf http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/432231663489158/ဆန်ဖွပ်သည့် အဖိုးအို (ချစ်စံဝင်း).pdf http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/432235810155410/မဆုတ်တမ်း မနစ်တမ်း မလျော့တမ်း (ချစ်စံဝင်း).pdf http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/432242070154784/
အရည်အသွေး (ချစ်စံဝင်း).pdf http://www.facebook.com/g
အမေနှင့် အမေအကြောင်း (ချစ်စံဝင်း).pdf http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/432230696822588/
ဘ၀၏ အလှတရားကို ရှာဖွေခြင်း (ချစ်စံဝင်း) https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/425728990806092/
မြန်မာမြို့ဟောင်း တကောင်းရုပ်ပုံလွှာ (ချစ်စံဝင်း)
မဆုတ်တမ်း၊မနစ်တမ်း မလျှော့တမ်း (ချစ်စံဝင်း)
တော်ဝင်စံထား မိန်းမသား (ချစ်စံဝင်း)
သေနင်္ဂဟဗျူဟာ အတက်ပညာ (ချစ်နိုင်-စိတ်ပညာ)
များဖြစ်သောကြောင့် တာဝန် အလွန်ကြီးပါသည်။
ထို ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်း ကျွန်မတို့ ဖတ်သောစာအုပ်များက ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။
အမှတ်တရ (ဂျူး) http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/a_mhat_ta_ya_juu.pdf
ပင်လယ်နှင့်တူသောမိန်းမများ (ဂျူး) http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/pinlainaithutawmeinmamyar.pdf
Posted by: admin under ဂျာနယ်ကျော် မမလေး
Tags: ၀တ္တုရှည်မေ့အိပ်မက်(ဂျာနယ်ကျော်မမလေး) Download Herehttp://www.myanmarebooks.net/wp-content/uploads/2011/07/journalkyaw.pdf
—————–October 24, 2010 at 7:59 pm
ရှုမငြီး (ဂျာနယ်ကျော်မမလေး)Posted by: black.pirate under ဂျာနယ်ကျော် မမလေး
ရှုမငြီး Download Herehttp://www.myanmarebooks.net/wp-content/uploads/2010/10/JournalKyawMaMaLay_ShuMaNyee.pdf
Posted by: black.pirate under ဂျာနယ်ကျော် မမလေး
သူလိုမိန်းမ (ဂျာနယ်ကျော်မမလေး) Download Herehttp://burmesebooks.files.wordpress.com/2010/01/e1809ee180b0e1809ce180ade180afe18099e180ade18094e180b9e180b8e18099e18082e180bae180ace18094e1809ae180b9e180b1e18080e180bae180ace180b91.pdf
သူလိုလူ (ဂျာနယ်ကျော် မမလေး)
သူလိုလူ (ဂျာနယ်ကျော် မမလေး) Download Herehttp://burmesebooks.files.wordpress.com/2009/12/e1809ee180b0e1809ce180ade180afe1809ce180b0.pdf
ပျိုလေးတို. အိမ်ခေါင်မိုး (ဂျာနယ်ကျော် မမလေး) Download Herehttp://burmesebooks.files.wordpress.com/2009/12/pyo-lay-do-ain-khaunmoe.pdf
သွေး (ဂျာနယ်ကျော် မမလေး) Download Herehttp://burmesebooks.files.wordpress.com/2009/11/mamalayblood.pdf
မုန်း၍မဟူ (ဂျာနယ်ကျော် မမလေး)
မုန်း၍မဟူ (ဂျာနယ်ကျော် မမလေး) Download Herehttp://burmesebooks.files.wordpress.com/2009/11/journalkyawmoneywaymahu.pdf
အဖြူ (ဂျာနယ်ကျော် မမလေး) Download Herehttp://burmesebooks.files.wordpress.com/2009/11/e180a1e180bbe18096e180b4-e18082e180bae180ace18094e1809ae180b9e180b1e18080e180bae180ace180b9e18099e18099e180b1e1809ce180b8.pdf
နီကိုရဲ – မုန့်လုံးရေပေါ်
နီကိုရဲ – တစ်သုံးခုနှစ်ရှစ်
နီကိုရဲ – ပန်းပွင့်ကိုဖယ်ကြည့်မှမြင်ရမဲ့လမင်း
နီကိုရဲ – နှလုံးသားထဲကြွက်ဝင်နေသည်။
နီကိုရဲ – လှည့်စား
နီကိုရဲ – အို လေး
နီကိုရဲ – ကျွန်တော်နှင့်ရိုက်ကွင်းပေါ်မှအလွဲများ
နီကိုရဲ – နှလုံးသားနှင့်ကန်တဲ့ ဘော်လုံး-၁
နီကိုရဲ – နှလုံးသားနှင့်ကန်တဲ့ဘောလုံး-၂
နီကိုရဲ – နှလုံးသားနှင့်ကန်တဲ့ဘောလုံး-၃
နီကိုရဲ – နတ်ဆိုးတကောင်နဲ့ရင်လွဲသူ
နီကိုရဲ – ရည်းစားစာ
နီကိုရဲ – လူနှင့်သူတို့၏ဟာသများ
နီကိုရဲ – ကျွန်တော်နှင့် လက်တွဲဖော်များ
နီကိုရဲ – သံစုံကြူးတဲ့ည
နီကိုရဲ – ဇက်ပေါ်ကဇီးသီး
နီကိုရဲ – ငတုံး
နီကိုရဲ – ကျမ၏ ပြား
နီကိုရဲ – ဒဏ်ရာရလိပ်ပြာအထူးကု
နီကိုရဲ – ဘာကြီးလဲ
နီကိုရဲ – ဘနာ
နီကိုရဲ – မချစ်ဘူး
နီကိုရဲ – စိတ်အိုင်ပတ်သူ
နီကိုရဲ – မိန်းမအလွဲများ
နီကိုရဲ – ကြက်ဖ
နီကိုရဲ – ညှို့တံမဲ့မြှားနှစ်စင်း
နီကိုရဲ – သူရာထောင့်မှအလွဲများ
နီကိုရဲ – သစ္စာမြှား
အကြည်တော် – ကဝေပျို၏နိဒါန်း
အကြည်တော် – ကျောက်သင်ပုန်းတွေမိုးထားတဲ့အိမ်
အကြည်တော် – လျှို့ဝှက်သောကစားပွဲများ
အကြည်တော် – ပြုံးတော်မူ
အကြည်တော် – ငုံး
အကြည်တော် – ချစ်ခြင်းကထာ
အကြည်တော် – အန္တိမအမ္မ
အကြည်တော် – လူဆိုး
အကြည်တော် – ယောက္ခမနဲ့တစ်ထောင့်တစ်ည
အကြည်တော် – ဆွေတစ်ရာမောင်တစ်ကျိပ်
အကြည်တော် – သဲလှည်း
အကြည်တော် – အိမ် အပိုင်း(၁)
အကြည်တော် – အိမ် အပိုင်း(၂)
အကြည်တော် – အိုင်အိုဒင်းကိုကိုကြီးနှင့် …
အကြည်တော် – ဘီလူး
အကြည်တော် – ရီတန်းအောဖ့်ဘီလုး
အကြည်တော် – ပိုးကောင်များ
အကြည်တော် – မိုးတိ်မ်ပုံပြင်
အကြည်တော် – တောသားကြီး
အကြည်တော် – တခါက .. ငယ်ငယ်လေးတွေ
အကြည်တော် – ပြတ်ထွက်သွားသော ကျောရိုးဆစ်လေးများ
အကြည်တော် – နတ်နေကိုင်း
အကြည်တော် – ရွှေမိုးသည်း
အကြည်တော် – ခင်မှုန်မင်္ဂလာဆောင်
အကြည်တော် – ဇော်က . ကနေသည်
အကြည်တော် – နတ်ပြည် နံနက်ခင်း
အကြည်တော် – ညာတာပါတေး
အကြည်တော် – အချစ်သာအမှန်တရားဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်မှားနေတာကြာပြီ။
အကြည်တော် – ဇ
အကြည်တော် – ချစ်လို့စတာနာတယ်
အကြည်တော် – အို…ဘာတဲ့
အကြည်တော် – မျက်နှာပုံပြင်
အကြည်တော် – မိတ္တ ဟဒယ ဟာသ တက်ကျမ်း
အကြည်တော် – အောင်မြေ
အကြည်တော် – နေတခြမ်း လတခြမ်း
အကြည်တော် – ဝါရင့်အရောင်းထိုင်း
အကြည်တော် – မြစ်ပြင်ပေါ်ထင်ကျန်နေသောမြွေခြေရာများ
အကြည်တော် – ကလေးလက်ရေး
အကြည်တော် – လူလည်ကြီးများရွာ
အကြည်တော် – မိချော
အကြည်တော် – မိန်းမဋီကာ
အကြည်တော် – လေယာဉ်ပျံတစ်စီးနဲ့ ကမ္ဘာရွာကြီး
အကြည်တော် – ရွှေရင်ရှုပ်
အကြည်တော် – မောင်စောကြည်ဖြူနှင့်မမြင့်ဆန်းရီ
တာရာမင်းဝေ – ပန်းခေတ်ကလမင်း
တာရာမင်းဝေ – စုန်းကိုက်ခံရတဲ့ပန်းသီး
တာရာမင်းဝေ – ကျောခိုင်းထားတဲ့နေမင်း
တာရာမင်းဝေ – ပန်းလက်ဖဝါးမှာပါးအပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ကောင်ကလေး
တာရာမင်းဝေ – ရွှေတောင်ပံမှာ ဒဏ်ရာတွေ ပြန်ကောင်းလာမယ့်တစ်နေ့ Google Doc
တာရာမင်းဝေ – ဝင်္ကပါကိုဖွင့်တဲ့သော့
တာရာမင်းဝေ – ကျွန်တော်နဲ့ဧဒင်ကခြေသည်
တာရာမင်းဝေ – အရှေမြို့ ရိုးကမိုးရေစက်များ
တာရာမင်းဝေ – ရွှေဖိနပ်မှာအစိမ်းရောင်ကြက်ခြေခတ်နဲ့ကောင်မလေး
တာရာမင်းဝေ – ပြိုင်မြင်းတို့ရဲ့ခွာသံ
တာရာမင်းဝေ – ကိုယ့်လက်နဲ့ဖမ်းမိတဲ့နဂါးငွေ့တန်း
တာရာမင်းဝေ – ကောင်းကင်အကြွေ ကောက်တဲ့လက်.
တာရာမင်းဝေ – မှော်ဆရာရဲ့ ကျောင်းစာအုပ်
တာရာမင်းဝေ – ကျွန်တော်နဲ့ကြယ်မြင်လမြင် လောကဓံ
တာရာမင်းဝေ – သင်နှင့်နံနက်ခင်းကိုသာဝင် ခွင့်ပြုမည်
တာရာမင်းဝေ – ကျွန်တော်နဲ့ကြေးသွန်းယဉ်ကျေးမှု
တာရာမင်းဝေ – ကိုးမရှိတဲ့န၀င်း
တာရာမင်းဝေ – လရောင်ကိုပန်၍ ညယံ၌လည်း မွေးမွေးမြမြဖြူစင်နိုင်စေ
တာရာမင်းဝေ – ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပုရပိုက်
တာရာမင်းဝေ – ရှူး
တာရာမင်းဝေ – သူအိုးပုတ်လေး ကျွန်တော်ပြန်မပေးပါ
တာရာမင်းဝေ – ပင်လယ်အတုထဲကကျွန်း
တာရာမင်းဝေ – ကျွန်တော်နှင့် ကံကြမ္မာလက်နက်များ
တာရာမင်းဝေ – မိုးခေါင်လို့တီးတဲ့ဗုံသံ နှင့် တခြားကဗျာတိုများ
တာရာမင်းဝေ – အနေအထိုင်မတတ်တဲ့ကြယ်
တာရာမင်းဝေ – လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ကျောက်ထွင်းရာဇ၀င်
တာရာမင်းဝေ – ယန္တရားအရေခွံနဲ့လူ
တာရာမင်းဝေ – စံပယ်အတွေး (ဝတ္ထုတို)
တာရာမင်းဝေ – စောင်းကြိုးပြတ်ရွာ မွန်းတည့်အလွန် ၄ နာရီ (အသစ်တင်တာပါ)
တာရာမင်းဝေ – ကျွန်တော်နှင့် အဝါရောင် ဗီးနပ်စ်
တာရာမင်းဝေ – ကျွန်တော်နှင့်ဆောင်းရာသီဒဿန
တာရာမင်းဝေ – မျဉ်းဖြောင့်၏ ဧရိယာ
တာရာမင်းဝေ – သိုးဆောင်းဂစ်တာတစ်လက်ရဲ့ မှတ်တမ်း
တာရာမင်းဝေ – တစ်ကိုယ်တော်ရေးတဲ့ ကကြီးကခွေး
တာရာမင်းဝေ – စောင်းကြိုးတန်းလန်းနဲ့ လခြမ်း
တာရာမင်းဝေ – ကြယ်သီချင်းနဲ့ လမင်းသံစဉ်
တာရာမင်းဝေ – နေရဲ့ အင်္ကျီ
တာရာမင်းဝေ – ဝတ်မှုန်တစ်စက်ရဲ့ အထ္ထုပ္ပတိ
တာရာမင်းဝေ – နတ်ပျိုမအတွက်ပန်း
တာရာမင်းဝေ – ဓါးမှတ်စု(ဝတ္ထုတို)
တာရာမင်းဝေ – ကျွန်တော်နှင့် နတ်ဘုရားရုပ်တု(ဝတ္ထုတို)
တာရာမင်းဝေ – လူနံပါတ်-၁၃ (ဝတ္ထုတို)
တာရာမင်းဝေ – သူသည် ကဗျာဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သည် (ကဗျာများ)
တာရာမင်းဝေ – ကျွန်တော်တူးဖော်ခဲ့သည့်မြေစိုင်မြေခဲများအကြောင်း
တာရာမင်းဝေ၊ ဝေမှူးသွင် – မိုးရာသီပတ်ပျိုး
တာရာမင်းဝေ – ကတ်သီးကတ်သတ် အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ
အဲဒါကို မြန်မာလိုပြန်ထားတာလေး ဖတ်ချင်တာ..
မြန်မာပြန် အမည်နဲ့က.. “ဆင်းရဲဖေဖေ… ချမ်းသာဖေဖေ” ဆိုလားပဲ..
သဂျီးပြောတဲ့ စာအုပ် ဒီလင့်မှာ ရှိပါတယ် …
ညီညီနိုင် ဘာသာပြန်ထားတာပါ ..
အဲဒါ.. ဒေါက်တာကြည်မေကောင်းသားတယောက်ကလုပ်တဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်လို့ထင်တယ်..
အဲ့ဒီစာအုပ် ကျမဆီရှိတယ် သူကြီး ခဏနေ ပုစင်းတကောင်နဲ့ ပို့ပေးလိုက်မယ်
ကျေးဇူးပါ ရွှေအိမ်စည်ရေ ။ နည်းနည်းလေး ထပ်မေးချင်လို့ပါ။
ဂျူးရေးတဲ့ ခုချိန်ဆို ရှင်ဘယ်ရောက်နေမလဲ ဆိုတဲ့ စာလေးရော ရှိသလားလို့ပါ။
သိပ်မသေချာတာက ကျမက ဂျူးကို like လုပ်ထားတော့ သူစာမျက်နှာမှာ တွေ့ပြီး စာအုပ်ဆိုင်မှာရှာမတွေ့လို့ပါ။ ဒါမှမဟုတ် စာအုပ်ထဲက တပိုင်းတစကို တင်ပေးထားတာလား မသိဘူး။
အဲ့ဒီ စာသားလေး သဘောကျလို့ပါ။
နေစောင်းပီမို့ ..ခုဆို သေတင်းကုတ် ရောက်နေမှာပေါ့လို့….
ကျနော်..ရှာကြည့်တယ်…..သူ့ စာအုပ်အမည်စာရင်းမှာမတွေ့ မိသေးဘူး…..:P
Credit to http://www.poemscorner.com
ဘီယာလိုပဲ ခါးတယ်နော်။ ။
25-03-2012, 05:37 PM
ပိုချစ်တဲ့သူ ကိုယ်ဖြစ်ပါရစေ (ဂျူး)
လူ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်ကို
ကြယ်ဆိုတာက ကိုယ့်တို့အတွက် လောင်ကျွမ်းနေရ။
ကိုယ်တို့က ဘာမှ ပြန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပါရင်၊
ကိုယ်က ဗလာကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်ရင်း
ပိန်းပိတ်တဲ့ အမှောင်ရဲ့ ခမ်းနားမှုကို
ဆင်းရဲသောဖေဖေ ချမ်းသာသောဖေဖေ (ညီသစ်)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00033.pdf
ဆုပေးလို့ ကျေးဇူးပါ လက်တော့ညောင်းတာပေါ့…..
ကူးယူခဲ့ တဲ့ နေရာမှာတော့ ကောမက်ရေးခဲ့ တာပါဘဲ..
ဝေမျှတာပါဘဲလေ…ဖိုရမ်က ကျနော့်ဂေဟာပျောက်သွားလို့ ပါ။
ညီသစ်ရေးတာ..မှန်တယ်ဆိုရင်ဖေ့ ဘုတ်ကသူကြီးစာမျက်နှာမှာပို့ လိုက်ပါတယ်…
ကျနော်က ဒီနေ့ ၂ ပုဒ်တင်ပြီးသွားပြီမလို့ ……နောက်နေ့ မှတင်ပါမယ်…
အချိန်ရတိုင်းဖတ်ရမှာမို့ သိမ်းထားလိုက်ပါတယ် ရွှေအိမ်စည်ရေ။ ဖတ်ပီးသားစာအုပ်တွေကို ဒီလိုပြန်ရှာမဖတ်နိုင်ရင် မမှတ်မိတော့လို့ တနေရာထဲအကုန်ရအောင်လုပ်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ ဆရာမ ဂျူးရဲ့ကဗျာတွေကိုလဲ ထပ်မံ အားပေးခွင့်ရတာ ကျေးဇူးအဂန်းပါ။
“ဖိုရမ်က ကျနော့်ဂေဟာပျောက်သွားလို့ ပါ။”
တစ်ခါတစ်လေ ၊ တစ်ချို့ တိုက်ဆိုင်တဲ့ ရှေးဇါတ်လမ်း ရှေးစာတွေကို ရွာထဲကလူတွေ ဖတ်စေချင်လို့ ဖိုရမ်မှာ တင်ချင်တဲ့အခါ
အဲဒီကုလားဟက်ကာချစ်ချစ်တွေ.. သမ, သွားတာမှာ ဖိုရမ်ပါသွားတယ်..
အဲဒီမှာ.. ရွှေအိမ်စည်က ရွာပြင်ဆိုပြီး တင်ပေးထားတာတွေအများကြီးပဲ..
ကျုပ်လည်း ရွာအကြောင်း.. ရွာသူားတွေအသိပေးတဲ့နေရာပါ..
သဂျီး USမှာတော့ မသိဘူး
ဒီမှာ ညသန်းခေါင် ၁ခွဲ
ဒေါင်းလို့ရသလောက် ဒေါင်းထားလိုက်ပါတယ် …
တစ်ချို့ဖိုင်တွေက ဖတ်ရုံပဲရပြီး ဒေါင်းဖို့ အကောင့်ဝယ်ခိုင်းနေတယ် …
ဆရာဦးကြောင်ကြီးရေးတဲ့ “ကြောင်အီးတဘူဘူပေါက်..မောင်ကြီးရှုရှုသောက်” အမျိုးသား ရသစာပေဆုရ စာအုပ်ရှိရင် ပြောပါဗျို့…